ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ | iMyanmarHouse.com
ျမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ ႔နယ္အားလံုး
ေၾကာ္ျငာအာလုံး ဘဏ္အရစ္က် ရႏိုင္ေသာ
ပေ (41 x60) ကျယ်ဝန်းသောလုံးချင်းအိမ်(2RC) တိုက်သစ်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ရောင်းမည်
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဈေးနှုန်း 3,900 သိန်း (ကျပ်) လုံးချင်းအိမ်တည်ရှိ...
3,900 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8983948 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ (၃၁)ရပ်ကွက်တွင် ရောင်းရန်ရှိသည်။
#Single_House_For_Sale [English Below] -...
1,500 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8971203 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
09257270070, 09765198105, 09965198105
TPL Myanmar Real Estate ပိတ္ရန္
Studio Unit at City Loft for sale
သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
City Loft အိမ်ရာဟာ ရန်ကုန်မြို့ သန်လျင်တံတားအဆင်းက StarCity အိမ်ရာဝင်းထ...
512 သိန်း (ကျပ်)
ပေအကျယ်(15x30 )နှစ်ခန်းပါ ကျယ်ဝန်းသောဂမုန်းပွင့်ဆိုင်ခန်းရောင်းမည်
မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
သိမ်ဖြူစာတိုက်အနီး မကြာမီဖွင့်လှစ်မည့် မြန်မာပြည်၏ အဆင...
3,500 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8913710 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
11,000 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8991340 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
🏠သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ငမိုးရိပ်ရပ်ကွက် ငမိုးရိပ်၄လမ်း ၅လွှာ (မှန်ခန်...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8913287 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ကမာရွတ်မြို့နယ် Diamond Condo အခန်းအမြန်ရောင်းမည်
ကမာရွတ် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,200 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8992440 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ရွှေလင်းအိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း ပိတ္ရန္
18×52ပေ ကျောက်ကုန်း Mini Condo တိုက်သစ် အသင့်နေထိုင်နိုင်
ရန်ကင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ရန်ကင်း ကျောက်ကုန်း 18×52(7)လွှာ 2BR ပါကေး AC ပြင်ဆင်ပြီး ထေါင်ခန်း ရေမီစုံ က...
1,050 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8954574 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
စည်တော်ကြီး အိမ် ခြံ မြေ အကျိုးဆောင် ပိတ္ရန္
50×100ပေ လုံးချင်းတစ်ထပ် အသင့်နေထိုင်နိုင်
မင်္ဂလာဒုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မဂ်လာဒုံ ပုလဲမြို့သစ် 50×100 1RC 2BR ရေမီးစုံ ဂရန်...
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-8933748 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
6,000 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9002727 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
1,600 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9002695 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ပထမထပ် အလွှာနိမ့် စျေးတန် တိုက်ခန်း​ေရာင်းမည်
525 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9002585 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
SUCCESS LIFE REAL ESTATES SERVICES ပိတ္ရန္
500 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9002507 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
ဗဟန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
1,850 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9002464 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
Dream(ေ႐ႊအိမ္မက္) Real Estate ပိတ္ရန္
​စျေးတန် မြေညီထပ် ရောင်းမည်
420 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9002436 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
(1) ထပ် RC VIP (60x60) အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း ရောင်းမည်
ရွှေပြည်သာ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9001904 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
09 451 338 269 / 09 4044 755 35 / 09 69 79 757 19 / 09 777 288 308 / 09 450 35 1010
Golden Asia Real Estate and General Service Co.,Ltd. ပိတ္ရန္
ပေအကျယ် (37x54) မီနီကွန်ဒို၊ (2)ခန်းတွဲ (၈)ထပ်တိုက်၊ (Decoration ပါပြီး၊ ဘဏ်အရစ်ကျရ)
1,400 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9001770 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
09 407329911, 09 407329922, 09 407329933, 09 407329944, 09 407329955,09407329911,09407329922,09407329933,09407329944,094
🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ မေတ္တာလမ်းအနီး တိုက်သစ်အလွှာနိမ့် (hall type)...ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
630 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9001612 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
09-763 810 191 / 09-445 823 005,09-699860804,09763810191,09445823005,09699860804
Aung Ta Khit Real Estate Service. ပိတ္ရန္
🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၁၀.ရပ်ကွက် သစ္စာလမ်းမအနီး တိုက်သစ် (hall type)...ရောင်းပါမည်...🙏🙏🙏
450 သိန်း (ကျပ်)
ေၾကာ္ျငာနံပါတ္ S-9001409 အတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္